निर्वाचनका सन्दर्भमा पत्रकारको भुमिका र जिम्मेवारी के ?
‘किस्ता किस्तामा निर्वाचन किन ? सुरक्षा वा सरकारको चाहना’
प्रकासित मिति : २०७४ बैशाख ३०, शनिबार प्रकासित समय : १०:०९
पत्रकारीता जगत एकपछि अर्को बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा विकासको जग बलियो बनाउँदै अघि बढिराखेको छ । नेपालमा पनि पत्रकारीताको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विधा र प्रविधि भित्रीदै आइरहेको देख्न सकिन्छ । सञ्चारमाध्यमहरु साप्ताहिकबाट दैनिक हुँदै अब त झन अनलाइन मिडियाहरुको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । टेलिभिजन, रेडियो मात्र होइन, अहिले अनलाइन मिडिया अझैं बढि लोकप्रिय भएका छन । विभिन्न यस्ता माध्महरु एकपछि अर्काे गरी हाम्रो समुदायमा आउँदै गरेका छन । दैनिक पत्रिकाहरु अब पुराना हुन थालेकी जस्तो पनि देखिन्छ । यी सबैका बाबजुत पनि पत्रकारहरुको संख्या भने यस क्षेत्रमा रुचि लाग्दो रुपमा बढेको देखिन्छ, यो राम्रो कुरा हो । पत्रकारीता क्षेत्रमा युवा पुस्ताको प्रवेशको क्रम बढेसँगै यसले एउटा व्यवसायको पनि रुपको पनि विकास गदैं लगेको छ । मेरो विचारमा पत्रकारीता दुई वटा अवस्थामा फस्टाउँछ, पहिलो कुरा लोकतन्त्र बलियो भएमा र दोश्रो कुरा देशमा राजनीति स्थायित्व, आर्थिक प्रगति भएमा । नेपालको सम्मान राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय जगतमा फैलियो भने नेपाली पत्रकारीता रहन्छ । मेरो विचारमा हामी सबै भन्दा माथि राष्ट्रियता रहेको हुन्छ, तसर्थ पत्रकारको पहिलो धर्म भनेकै राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने ढंगले सूचना, समाचारमूलक सामाग्रीहरुको सम्प्रेषण गर्नु ।
अब देशको लागि पत्रकारीता हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधिन्ता, राष्ट्रिय गौरबका लागि, राष्ट्रिय पहिचानका लागि पत्रकारीता हुनुपर्छ । हामीले त्यही ढंगले पत्रकारीताको ट्रेनलाई अघि बढाउने हो भने यो देशको विकास र संवृद्धीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । नेपाल रहेमा नै हामी नेपाली रहन्छौँ अनि नेपाल रहेमा नै नेपाली पत्रकारीता रहन्छ, नेपाल रहेमा नै नेपालमा मानव अधिकार रहन्छ, नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ । समाजमा भएका सबै खालका विकृति, विसंगतिहरु यि सबै पत्रकारीताको माध्यमबाट हटाउन सकिन्छ । हामी सबै मिलेर हाम्रो सामु भएका मूल समस्याहरुको निराकरण गर्नु पर्छ । त्यसैल हामी सबैको प्रमुख कुरो भनेको हाम्रो देश हो, राष्ट्र हो । हामी नेपाली भएकोमा गौरव गरौं । यो कुरालाई प्रत्येक पत्रकारहरुले समाचार लेख्दाखेरी त्यसले समाजमा के प्रभाव पार्छ के, असर हुन्छ भन्ने कुरा मनमा राखेर लेख्नुपर्दछ । हामीले लेखेको समाचारले मानिसहरुमा के प्रभाव पर्छ, देशलाई समाजलाई र समुदायका सबै व्यक्तिहरुलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि त्यो उपायोगी हुन्छ कि हुदैन ? सामाजिक सद्भावलाई त्यसले प्रोत्साहित गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुदैन ।
सुशासनको पक्षमा उभिनु पर्दछ । हाम्रा कमी कमजोरीहरुलाई औँल्याउन सक्नुपर्दछ । समाजमा राम्रा र नराम्रा दुवै कुराहरु छन, हामीले सबै नराम्रा पक्षहरुलाई सुधार्नका लागि समाचार मार्फत रुपमान्तरणको वहसर्ला कसरी उठाउने, यो पहिले नै सोच्नु पर्दछ । सामान्यतया आम रुपमा सकारात्मक विचार हुनुपर्दछ । सकारात्मक पत्रकारीताले नै देश सुध्रिन्छ । पत्रकारीताले नै जनतालाई मिलाउने काम गर्दछ । असल पत्रकारीताले नै समाजमा सकारात्मक भुमिका खेल्छ ।
नेपालको एकताको मूल आधार भनेको नेपालका सबै जातीहरुबीचको एकता हो । नेपालको राष्ट्रियताको सुदृणिकरणको आधार भनेको नेपाली जनताबीचको प्रेम र सद्भाव हो । यो सद्भावमा आँच आउने कुनै पनि कुरा हामीले गर्नु हुँदैन । अनैतिक कुरालाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन । नेपालको नाममा अनैतिक कुराहरु फैलिने, कुनै नराम्रो प्रभाव पार्ने, ठूलो समस्यामा पार्ने, मुलुकमा द्धन्द्ध निम्ताउने, द्धन्द्ध चर्काउने, यस्ता कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । हामीले कुनै बिकृतिसँग सम्झौता पनि गर्ने होइन । सुशासनको पक्षमा उभिनु पर्दछ । हाम्रा कमी कमजोरीहरुलाई औँल्याउन सक्नुपर्दछ । समाजमा राम्रा र नराम्रा दुवै कुराहरु छन, हामीले सबै नराम्रा पक्षहरुलाई सुधार्नका लागि समाचार मार्फत रुपमान्तरणको वहसर्ला कसरी उठाउने, यो पहिले नै सोच्नु पर्दछ । सामान्यतया आम रुपमा सकारात्मक विचार हुनुपर्दछ । सकारात्मक पत्रकारीताले नै देश सुध्रिन्छ । पत्रकारीताले नै जनतालाई मिलाउने काम गर्दछ । असल पत्रकारीताले नै समाजमा सकारात्मक भुमिका खेल्छ । अध्याँरोलाई निर्मुल पार्छ भने उज्यालोलाई सबैतिर फैलाउँछ ।
अहिले हाम्रो देश एउटा संविधानको कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढि सक्यो, हुनत हामी जहिले पनि नकारात्मक र आशंका गर्न सुरु गरिहाल्द छौ, तर त्यो पनि गर्नु हुदैन । अहिले पनि मतदाताहरु चुनाव हुन्छ कि हुदैन भन्ने दोधारमै देखिन्छन । उम्मेदवारहरुलाई मतादाताले सोध्छन, होइन यो वैशाख ३१गते चुनाव हुन्छ कि हुदैन ? अब दिन आइसकेको छ , दोश्रो चरणको चुनाव चाही कहिले हुन्छ ? किन किस्ता किस्तामा निर्वाचन गरेको होला सरकारले, एकै पटक नसकेर वा नचाहेर ? अहिले आम जनताको मनमा यस्तै प्रश्नहरुले डेरा जमाएको छ । अनि कतिपयले मनमा उब्जिएको कुरा सोध्छन, सोधि सकेपछि मनमा शंका बढ्छ, अनि शंका बढेपछि संकल्प कमजोर हुन्छ । अनि गर्नु पर्ने काम समयमा हुदैन । तपाईले देख्नु भएको छ, अहिले निर्वाचन आयोगमा कतिपय पार्टीहरु दर्ता रहेका छन, अनि निर्वाचनको मुखमा किन मिल्छन ? यसको पछाडि कारण अरु कोहि होइन, जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्ने मानसिकता हो । त्यसले राजनीतिलाई प्रदुसित गराउने सम्भावना बढि बोकेको हुन्छ । एकै चोटी नसोचिकन तालमेलको नाममा आफ्नो राजनीतिक आचरण, निति र विधानलाई बिर्सेर निर्णय गरिदिने, अनि सत्ताँमा बसिराख्ने अस्त्रको रुपमा यसको प्रयोग गर्ने शैलि बिलकुल ठिक हुदैन ।
मुलुक अहिले निर्वाचनमय भैसकेको छ, स्थानीय तहको धेरै संख्या तलमाथि गर्न खोज्ने अनि सबैले एकै चरणमा देशैभरी चुनाव गर्ने भनेको भएपनि कुरा किस्ता किस्ताको चुनावको आइदिने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिने यि सबै यि सबै विषयले भने धेरैको मनमा शंका र डर पलाउनु स्वभाविक नै हो । यि सबैका बावजुत पनि मूलक निर्वाचनको लागि अगाडि बढेको छ, वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन हुन गैराखेको छ । ठिक के लागेको छ भने, मधेसी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटकले पनि निर्वाचनमा सहभागीता जनाएको छ । उहाँहरुले राम्रो काम गर्नु भएको छ । एउटा भनाइ छ नि, ‘आप भला त सब भला’ अन्तमा राम्रो काम हुन्छ भने अरु कुराहरुलाई बिर्सेर हामीले मिलेर नै जानु पर्छ । यस अर्थमा मुलुकको राजनीति राम्रो दिशामा अगाडि बढोस् , हाम्रो चाहना यहि हो ।
बहुत लामो समय पछि, झन्डै बिस बर्षपछि स्थानीय निकायमा भएको बजेटको दुरुपयोग रोकिनु पर्छ, यसको सहि सदुपयोगका लागि एमालेले अघि सारेको धारणाका कारण चुनावको घोषणा भएको छ, अब यसलाई अनुशासीत र मर्यादित रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्दछ । स्वभाविक रुपमा मत प्राप्त गर्नका लागि सबैले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचार प्रसार गर्नु पर्छ, त्यो पनि निर्वाचन आयोगले अघि सारेको ऐन, नियम भित्र रहेर मात्र । लोकतन्त्रको अभ्यासले जनताले अधिकार प्राप्त गरिरहेका छन । संविधान पाइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । अब कसले जित्ने हो, जसले जनताको मन जित्छ उसैले चुनाव जित्छ । निर्वाचन सक्षम होस, धाँधलिरहित होस्, यहि हाम्रो अपेक्षा हो । निर्वाचन आयोगले चुनाव मात्र सम्पन्न गर्ने होइन, मतदान गराउने मात्र होइन, मतगणना र त्यसको परिणामसम्म अत्यन्तै जिम्मेवार भएर भुमिका निर्वाह गर्न सकोस् । सरकारलाई पनि मेरो भन्नु छ तपाईहरु तलमाथि गर्ने कुनै काम नगर्नुहोस् । अहिले अर्काे चरणको निर्वाचनको बारेमा अझै अन्योलता छ, जेठ पन्ध्र गते संविधान बमोजिम बजेट घोषणा गर्नु पर्ने छ र बजेट घोषणा गरेर अनि बजेटमा लोकप्रिय कुरा, चुनावी कुरा ल्याएपछि आफ्ने अनुकुलता मिलाउदै चुनावमा जाने कुरा कदापि मन्जुर हुदैन । यो कहि दुनिँयामा हुदैन, त्यसो भएको हुनाले जेठ पन्ध्र गते पहिले नै चुनाव गरिनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । जेठ ३१ गते सम्म पर्खिनु पर्ने कुनै कारण छैन, मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई सोध्दाखेरी ‘हामीलाई एक हप्ताको समय प्रायाप्त हुन्छ’ भनेका थिए । एक हप्ता भन्दा बढि समय लाग्दै लाग्दैन, त्यसो हुनाले बढिमा दश दिनको समय दिएर बाह्र गते पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । यो कुरामा पनि पत्रकारहरुको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
यो चुनाव भइसकेपछि प्रत्यक गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको भाग कति पर्ने अर्थात एउटा गाउँपालिका इजिकल्टु एउटा नगरपालिकाको एक भोट वा बराबर भोट त्यो संविधानमा लेखिएको छैन, त्यो विषयमा मतधार तयार गरिनु पर्दछ । मतदान सम्बन्धी अहिले सम्म कुनै कानुन बनेको छैन । अनि चुनाव हुन थाली सक्यो, कानुन बनाउन सरकारको ध्यान छैन । अनि चुनावको परिणाम आइसकेपछि कसले कति जिते त्यसको आधारमा मतधार तयार गर्ने ?
हाम्रो माग के हो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ पन्ध्र गते भन्दा पहिले नै गर्नु पर्छ । चार वटा प्रदेशमा चुनाव गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि आउने परिणामले मान्छेमा एउटा विश्वास हुनेछ । प्रान्तिय चुनावको निम्ति, संघिय चुनावको निम्ति, केन्द्रिय चुनावको निम्ति जनतामा आशा जागेको छ । त्यसो हुनाले प्रक्रियाअघि बढि सक्यो केहि मिलाउनु पर्ने, केहि ध्यान दिनु पर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जाहोस् । सरकार कति गैर जिम्मेवार छ भने, गर्नै पर्ने चार वटा काम गरेको छैन । यो चुनाव भइसकेपछि प्रत्यक गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको भाग कति पर्ने अर्थात एउटा गाउँपालिका इजिकल्टु एउटा नगरपालिकाको एक भोट वा बराबर भोट त्यो संविधानमा लेखिएको छैन, त्यो विषयमा मतधार तयार गरिनु पर्दछ । मतदान सम्बन्धी अहिले सम्म कुनै कानुन बनेको छैन । अनि चुनाव हुन थाली सक्यो, कानुन बनाउन सरकारको ध्यान छैन । अनि चुनावको परिणाम आइसकेपछि कसले कति जिते त्यसको आधारमा मतधार तयार गर्ने ? अनि दोश्रो कुरा, तपाईलाई थाहा छ ? प्रतिनिधि सभाको लागि अझैपनि ऐन बनेको छैन, त्यो ऐनमा राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि फेरि स्वरको आवश्कता पर्छ, अहिले आएको स्वरले काम गर्दैन । यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनलाई मात्र हो । प्रतिनिधि सभामा काम गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको त्यो ऐनको नियम लागु हुनुपर्छ । त्यो सम्बन्धी ऐन अहिले सम्म आएको छैन ।
अर्को दुईवटा महत्वपूर्ण काम छन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र तय गरिनुपर्छ । त्यो सभा तय गर्नकालागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र भनेको १६५ हुन्छ, त्यो प्रत्येक जिल्लामा कुन कुन क्षेत्रमा र कुन कु्न इलाकामा कति पर्छ भन्ने त्यसको टुङगो अहिले लागेन भने निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भैसकेपछि जितेको जितेको गाउँ एक ठाउँमा राख्ने र अरुले हार्ने हार्ने भोटको अन्तर हेर्ने, त्यो के गर्न खोजेको हो ? होइन भने तुरुन्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरियोस् । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु भन्दा पहिले नै त्यो सबै तयारी गर्नु पर्ने हो तर यहाँ त निर्वाचनको दिननै आइसक्योे । अब सबैले शक्तिको परिचान गर्न लागिसके । तर सरकारले यो आयोग गठन गर्ने काममा कुनै कदम चालेको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो सरकार निर्वाचनको विषयमा जिम्मेवारपूर्ण नै छैन । यो अवस्थामा म यो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जीको ध्यान यता जाओस भन्न चाहन्छु ।
हामी राष्ट्रियताका सहयात्रीहरु हौँ, तसर्थ लोकतन्त्र र राष्ट्रिताको विकासको लागि हामि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न चाहान्छौँ । लोकतन्त्र जन सहभागितामूलक बन्न सकोस र त्यसले एक संक्षिप्त जिम्मेवारी लिन सकोस, यहि हाम्रो यो चाहाना छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यान खाली प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउने, त्यो पनि एउटा महिलामाथि, राम्रो छवि भएको व्याक्ति जसलाई निकालेर छाड्छु भन्नुहुन्छ । एमाले उभिएको छ उनको पक्षमा, सारा महिलाहरु उभिएका छन र पुरुष पनि उभिएका छन । त्यसो हुनाले तुरुन्तै महाअभियोग फिर्ता लिइयोस यो मेरो यो आग्रह छ । अहिले आईजीपी नियुक्ती को कुरामा लागेको छ, अहिले नै सैवैधानिक पद्धती बिग्री हाल्ने हो कि भन्ने डर पलाएको छ । जुन नगरि नहुने काम छ त्यसमा, भने सरकारले ध्यान दिएको छैन । कुन चिजले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो, कुनले पाउने होइन अहिले मात्र चुनावको मिति घोषणा भैसकेपछि फस्टट्रयाक रोडको याद सरकारले गरेको देखिन्छ । निर्वाचनबाट एउटा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आफ्नो हैसिएत थाहा पाउने छन । मैले केही संसदहरुसँग निर्वाचनको आँकलनबारे छलफल गरेको थिए, उहाँहरुबाट अत्यन्तै नराम्रो कुरा पाइयो, त्यो भने अहिले नै नभनि हालौ । नेकपा एमाले केहि ठाउँमा तालमेल पनि गर्दैछ र केही ठाउँमा एक्लै पनि प्रतिश्प्रधामा गएको छ । यसबाट हामी केहि सन्देश दिन चाहान्छौँ, हामीले नै जितेपनि अरु राजनीतिक दलहरुलाई कुनै मर्का नपरोस, हामी लोक्तन्त्रवादीका सहयात्री हौँ, तसर्थ निर्वाचनमा पनि तालमेल र सहकार्य गर्न चाहेका हौ । हामी राष्ट्रियताका सहयात्रीहरु हौँ, तसर्थ लोकतन्त्र र राष्ट्रिताको विकासको लागि हामि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न चाहान्छौँ । लोकतन्त्र जन सहभागितामूलक बन्न सकोस र त्यसले एक संक्षिप्त जिम्मेवारी लिन सकोस, यहि हाम्रो यो चाहाना छ । यो चुनावमा महिलाहरुले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ र महिलाहरु पनि विभिन्न वडाहरुमा जितेर आउने राम्रो सम्भावना देखिएको छ । केहि ठाउँहरुमा महिलाको लागि छुटुयाइएको सिटमा महिलाले र अरु ठाउँहरुमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखमा जितेर आउन भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।
यस अर्थमा हामीले संविधान प्रति गौरववोध गर्नुपर्छ । यो संविधानले सबैलाई समेटेको छ, कसैलाई छोडेको छैन, कसै कसैको मनमा त्यो भ्रम होला, कुनै समुदायलाई छोड्यो कि क्या हो भन्ने हुन सक्छ । संविधानले हिमाली, पहाडी, तराई कसैलाई पक्ष विपक्ष गरेको छैन । सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेको छ । हामी यस्लाई अगाडि बढाउन चाहान्छौँ, हामी अझै जिम्मेवारी दिन चाहान्छौँ, धेरै बर्षदेखि हुन नसकेको यो तल्लो तहमा लोकतान्त्रीक अभ्यास पुर्याउन चाहान्छौँ, यसलाई तपाईहरुको पनि पुरै ओल्याएर काम गर्नुहोला भन्न चाहान्छु । र निर्वाचनको सन्दर्भमा मिडिया र पत्रकारहरुको समेत महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ, तपाईहरुले पनि निर्वाचनमा हुन लागेका गलत कार्यहरु, निति र शैलिहरुको विषयमा सुधारात्क कोणबाट औल्याइदिनु होस । हामी सबै मिलेर मात्र समुन्नत राष्ट बनाउने अभियान सफल पार्न सक्छौ ।
(पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माथि प्रस्तुत गरिएको धारणा केहिदिन अघि, पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मान तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा ब्यक्त गरेका हुन ।)